YEYINTNGE(CANADA): Thursday, March 11
http://ifile.it/v8d2lwyMarch 11 2010 Yeyintnge Diary
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 3/11/20100အကြံပြုခြင်း
http://ifile.it/xn7kv0611 March 2010 NCUB Statement on SPDC Election Law
အကြောင်းအရာ ။ ။ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကိစ္စ
မကြာတော့တဲ့ကာလမှာ နဝတစစ်အာဏာရှင်တွေဟာ မြန်မာတပြည်လုံးကို စစ်ကျွန်ဘဝသွတ်သွင်းဖို့ ရည်ရွယ်တဲ့ အတုအ ယောင် ရွေးကောက်ပွဲကို ဖန်တီးဖို့ ကောက်ကျစ်စဉ်းလဲစွာ ကြံစည်အားထုတ်နေကြတာကို မြန် မာပြည်သူလူထုတရပ်လုံးသာ မက တကမ္ဘာလုံးက ပြည်သူတွေပါ သိကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ၂၀၀၈ နာဂစ်အခြေ ခံ ဥပဒေနဲ့ စစ်အာဏာရှင်တစု သားစဉ်မြေး ဆက် တိုင်းပြည်ရဲ့ဓနဥစ္စာတွေကို လုယက်စားသောက်နိုင်ဖို့၊ စနစ် တကျ စီမံနေကြတာကိုလည်း အထင်းသား မြင် တွေ့နေရ ပါ တယ်။
ဒီနေရာမှာ အာဏာရူးတွေအကြောင်းကို အဓိက ပြောချင်တာမဟုတ်ပါ။ စစ်အာဏာရှင်တွေ (ဗိုလ်နေဝင်းလက် ထက်ကစလို့)
ဟာ တလျှောက်လုံး သူတို့အလုပ်ကို သူတို့လုပ်ခဲ့ကြတာ တွေ့ရပါတယ်။ သူတို့အလုပ်ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်အာဏာရှင်
စနစ် သက်ဆိုးရှည်ရေးနဲ့ စစ်အာဏာရှင်တစု သားစဉ်မြေးဆက် ကောင်းစားရေး ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအလုပ်ကလွဲပြီး သူတို့
ဘာမှစိတ်မဝင်စားပါဘူး။ တိုင်းပြည်အကျိုး၊ ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးဆို တာ သူတို့အဘိဓမ္မာထဲမှာကို မရှိခဲ့ပါဘူး။ အဲ့ဒီတော့ကာ
သူတို့က သူတို့အလုပ်ကို သူတို့လုပ်ကြသလို ကျနော် တို့ဘက်ကလည်း ကျနော်တို့အလုပ် ကျနော်တို့ လုပ်ကြဖို့တော့ လိုပါပြီ။
အရင်မလုပ်ခဲ့တာတွေကို ပြန်ပြောင်းမပြောလိုတော့ပါ။ အခုတကြိမ်မှာတော့ ကိုယ့်အလုပ်ကိုကိုယ် ရဲရဲဝံဝံ လုပ် ကိုင်သင့်ပြီလို့
ထင်ပါတယ်။ (ထင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရက ကိုယ့်အချင်းချင်းမို့ အားနာပါးနာနဲ့ ရွေးလိုက်တာ ပါ၊ တကယ်ဆို ထင်ပါတယ်မ ဟုတ်ပါ လုပ်ကိုင်သင့်ပါပြီလို့ပဲ ရေးရမှာပါ)ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ တိုင်းပြည်တ ပြည်လုံးအမှန်တကယ် ချောက်ထဲကျတော့မှာ မို့ပါ။ အလုံးစုံပျက်သုန်းမှုကို အမှန်တကယ် ကျရောက်တော့မှာမို့ ပါ။
“ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲ အရင်တခါလို ယောင်ဝါးဝါးနဲ့ ကိုယ့်ခေါင်းဆောင်၊ ကိုယ့်ရဲဘော်တွေကို စတေးပြီး ခေါင်းပေါင်းစ တလူလူနဲ့
လွှတ်တော်ထဲဝင်ဖို့ ကြံကြမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီတချီမှာ လူထုက ခွင့်လွှတ်သည်းခံမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ အသိပေးချင်ပါတယ်။
အဲ့ဒီလိုသာ ဆုံးဖြတ်ကြမယ်ဆိုရင် ရန်သူက အားရပါးရနဲ့ ပါတီကို အသက်ရှင်ခွင့် ပေးသနားပေမယ့် လူထုကတော့ ပါတီကို
စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဖျက်သိမ်းရေး၊ တန်းတူညီမျှတဲ့ စစ်မှန်တဲ့ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတခု ပေါ်ပေါက်ရေးအ တွက် ပြည်သူလူ ထုဟာ အသက်သွေးချွေးပေါင်းများစွာ ပေးဆပ်တိုက်ပွဲဝင်ရင်း မပြီးသေးတဲ့ ဒီသမိုင်းတာဝန် ကို ၁၉၉၀ မေလရွေးကောက်ပွဲက နေတဆင့် NLD ကို တပ်ဦးတင်ပြီး လူထုဦးဆောင် တိုက်ပွဲဝင်ပါတီအဖြစ် လူ ထုက တပြည်လုံး တခဲနက်အာဏာအပ်နှင်းခဲ့တယ် မဟုတ်ပါလား။
အဲ့ဒီအချိန်က လူထုဟာ တပ်ဦးပါတီရဲ့ ဦးဆောင်မှုနောက်ကနေ လိုက်ပါဖို့ ပြတ်ပြတ်သားသား ဆုံးဖြတ် အပ် နှင်းခဲ့ကြ တာပဲဖြစ်တယ်။ ကံအကြောင်းမလှစွာဘဲ လူထုမျှော်လင့်တောင့်တမှုတွေဟာ အပြည့်အဝ မပြောနဲ့ တခုတလေတောင် မရတဲ့ အပြင် နောက်ထပ် သေကြေပျက်စီး၊ ဆုံးရှုံးမှုတွေ၊ ပေးဆပ်ရမှုတွေဟာ ကနေ့ထိ တွေ့ကြုံရင်ဆိုင်နေကြရတယ်။
အကြောက်တရားပေါင်းစုံကြားက လူထုဟာ ၉၀ ခုနှစ်မှာ NLD ပါတီကို ပေးအပ်လိုက်တဲ့ မန်းဒိတ်ဟာ အလွန် တရာ အင်အားကြီးမားလှပါတယ်။ စစ်အာဏာရှင်တွေ မင်သက်မိပြီး ကြောက်ဒူးတုန်၊ ခြေမကိုင်မိ လက်မကိုင် မိဖြစ်သွားကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ ဆက်မလုပ်နိုင်ခဲ့ကြဘူးဆိုတာ သမိုင်းက သက်သေပြနေတယ်။ သို့ သော်လည်း ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် NLD ပါတီဟာ ၉၀ မန်းဒိတ်ကို ကနေ့ထိ ကြံ့ကြံ့ခံ ကိုင်ဆွဲထားသေးတဲ့အတွက် လူ ထုအပေါ် သစ္စာရှိနေသေးတယ်ဆိုတာ မှတ်ယူလို့ရနေပါတယ်။
တခြားကိစ္စတွေ အသာထား ဒီတချက်ထဲနဲ့တင် NLD ကို ကျနော်တို့တတွေ (ပြည်သူတွေ) က ဝိုင်းရံအားပေး၊ ကာကွယ်သွားကြဖို့ အကြောင်းခိုင်လုံသွားပါပြီ။ ဒါကြောင့် ပြည်သူလူထုရဲ့ကိုယ်စား ကျနော်ပြောချင်တာက တော့ ၉၀ မန်းဒိတ်ကို ဆက်လက်ဆွဲကိုင်ထားပါ။ ဒါဟာ ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ်တာ၊ ပြည်သူက ပေးအပ်လိုက် တဲ့ တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ ပိုပြည့်စုံအောင်ဆိုရရင် ရွှေဂုံတိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ဆက်လက်ကိုင်ဆွဲခြင်းသည်သာ ပြည်သူတွေအပေါ် သစ္စာရှိရာရောက်ပါမယ်။
NLD ဆိုတာ စစ်အာဏာရှင်စနစ်တိုက်ဖျက်ရေး ၈၈ လူထုအုံကြွမှုကြီးကနေပေါ်ထွက်လာတဲ့ ပါတီတခုဖြစ်ပါ တယ်။ လူထုပါတီဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းပြည်နဲ့ လူထုအကျိုးစီးပွားအတွက် လူထုက တာဝန်ခံခိုင်းတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လူထုရဲ့လိုလားချက်တွေ၊ လူထုရဲ့ရင်ခုန်သံတွေကို နားထောင်ဖို့ လိုပါတယ်။ နိုင်ငံရေးပါတီတရပ်မှာ ပျော့ပျောင်းညင်သာတဲ့ နည်းပရိယာယ်လမ်းစဉ်ရှိရမယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှ ငြင်းမှာမဟုတ်ပေမယ့် မိမိပါတီရဲ့ အသက်တမျှ အရေးကြီးတဲ့၊ အခြေခံမူတွေကို ပြောင်းလဲ အလျှော့ပေး လိုက်လျောတဲ့ လုပ်ရပ်ကိုတော့ နည်းပ ရိယာယ်လို့ သတ်မှတ်လို့ရမယ်မထင်ပါဘူး။
လူထုရဲ့လိုလားချက်တွေ၊ လူထုနိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေ၊ မလုပ်နိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်၊ နိုင်ငံရေးပါတီတရပ်ရဲ့ ပါ တီတွင်း ပုံမှန်လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှုတွေမှာတောင် လွတ်လပ်စွာ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခွင့်ဆိုတဲ့ အနိမ့်ဆုံး အခွင့် အရေးလေးတောင် မရနိုင်တဲ့နေအထားမျိုးမှာ ပါတီတည်ရှိနေရေး၊ ပါတီဆက်လက်အသက်ရှင်နေရေးသက် သက်တခုတည်းဟာဖြင့် မူမဲ့တယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
ကောက်ကျစ်ယုတ်မာတဲ့ စစ်အာဏာရှင်တွေနဲ့ ရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာ ကျနော်တို့ဟာ မြွေမသေ တုတ်မကျိုး လုပ် နေလို့မရပါဘူး။ ရန်သူနဲ့ ရင်ဆိုင်ရာမှာ တိုက်ပွဲဝင်ပါတီတရပ်လို မကျင့်ကြံဘဲ သံတမန် တယောက်လို ကျင့်ကြံ နေလို့မဖြစ်ပါဘူး။ ပြတ်သားတဲ့ မူ၊ ခိုင်မာတဲ့ ခံယူချက်၊ ထက်မြက်တဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့သာ လူထုကို ဦး ဆောင်ပြီး ကောက်ကျစ်ယုတ်မာတဲ့ စစ်အာဏာရှင်တွေကို ရင်ဆိုင်တွန်းလှန်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ မိုးထဲလေထဲ မှာ မပြတ်မသား၊ ယောင်ဝါးဝါးလုပ်နေရင်တော့ ဒီမိုးဒီလေထဲမှာ လွင့်စင်ပျောက်ကွယ်၊ ကြေပြုန်းသွားမှာမလွဲ ပါ။
ကဲ … ခု နအဖရဲ့နာဂစ်ခြေခံဥပဒေကို အကောင်အထည်ဖော်မယ့် ၂၀၁၀ လူလိမ်လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ ဥပဒေတွေ ထွက်လာပါပြီ။ လူထုရဲ့မန်းဒိတ်ရပါတီ ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ကြမလဲ။ ထွက်လာတဲ့ ဥပဒေတွေ တော့ သာမန်မြန်မာစာဖတ်တတ်တဲ့ ကလေးကအစ ဘယ်လိုရည်ရွယ်ပြီး ရေးထားတယ်ဆိုတာ သိကြမှာဖြစ် တဲ့အတွက် ဒီနေရာမှာ ထပ်မပြောလိုတော့ပါ။ ၁၉၉၁ တုန်းကလည်း ပါတီဆက်လက်ရပ်တည်နိုင်ရေးဆိုတဲ့ အ ကြောင်းပြချက်နဲ့ ကိုယ်ပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပါတီကနေ မဆိုင်းမတွ ထုတ်ပစ်ခဲ့ကြ ပြီးပြီ။
အမှန်တကယ်တော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတာ NLD ပါတီတခုတည်းရဲ့ ခေါင်းဆောင်တယောက်ဆိုတာ ထက် ပိုမိုလေးနက်တဲ့၊ အမျိုးသားလက္ခဏာဆောင်တဲ့ လူထုခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင် ပိုမှန်ကန် ပါတယ်။ အဲ့ဒီတုန်းကလည်း လူထုတရပ်လုံးက အမျက်ဒေါသ ထွက်ခဲ့ကြရတယ်။ ယူကျုံးမရဖြစ်ခဲ့ကြရတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့လူထုဟာ နားလည်၊ စိတ်ရှည်မှုပေးပြီး၊ ပါတီကို ဆက်လက်ဝိုင်းရံအားပေးခဲ့ကြပါတယ်။ ကြားကာလက အကြောင်းအရာတွေကိုတော့ ဒီနေရာမှာ ပြန်မရေးတော့၊ မပြောတော့ပါ။
အခုကနေ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအနေအထားဟာ လမ်းဆုံလမ်းခွကို ရောက်နေပါပြီ။ မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသား ပြည်သူလူထုတရပ်လုံး ငရဲတွင်းထဲ ဆွဲထည့်တာကိုခံမလား။ ဒါမှမဟုတ် ရုန်းထွက်ပြီး ဒီမကောင်းဆိုးဝါးကောင် တွေကို သုတ်သင်ဖယ်ရှားကြမလားဆိုတာ၊ လူထုရဲ့မန်းဒိတ်ပါတီကြီးဖြစ်တဲ့ NLD အနေနဲ့ ပြတ်ပြတ်သားသား ဆုံးဖြတ်ပြီး၊ လူထုကို ဦးဆောင်တိုက်ပွဲဝင်သွားကြရမယ့် အချိန်ရောက်နေပြီလို့ ပြောချင်ပါတယ်။
ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲ အရင်တခါလို ယောင်ဝါးဝါးနဲ့ ကိုယ့်ခေါင်းဆောင်၊ ကိုယ့်ရဲဘော်တွေကို စတေးပြီး ခေါင်းပေါင်း စ တလူလူနဲ့ လွှတ်တော်ထဲဝင်ဖို့ ကြံကြမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီတချီမှာ လူထုက ခွင့်လွှတ်သည်းခံမှာမဟုတ်ဘူးဆို တာအသိပေးချင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုသာ ဆုံးဖြတ်ကြမယ်ဆိုရင် ရန်သူက အားရပါးရနဲ့ ပါတီကို အသက်ရှင်ခွင့် ပေးသနားပေမယ့် လူထုကတော့ ပါတီကို ဖျက်ပစ်ရပါလိမ့်မယ်။ လူထုက ယုံကြည်စွာအပ်နှင်းထားတဲ့ မန်းဒိတ် ကို အလွဲသုံးစားလုပ်မှုနဲ့ အပ်နှံထားတဲ့ မန်းဒိတ်ကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပြီး လူထုပါတီအဖြစ်ကနေ ဖယ်ရှားပစ်ကြ မှာဖြစ်တယ်။
“NLD ရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေ မှေးမှိန်သွားတဲ့ အခြေအနေ ဖြစ်သွားတယ်။ အနှစ် (၂၀) လုံးလုံး အကျဉ်းအကျပ် တွေကြားထဲမှာ နေလာတာ၊ မြန်မာပြည်ရဲ့ နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကို နိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ ဖြေရှင်းနိုင်မယ်လို့ ကျ နော်တို့ ယူဆတယ်၊ အခု သူတို့က မြန်မာပြည်ရဲ့ နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကို ဥပဒေနဲ့ ချည်ဖို့ လုပ်နေတဲ့အခါကျ တော့ ကျနော်တို့ ပါတီအနေနဲ့ အခက်အခဲတွေ တွေ့နေတဲ့ အနေအထားမှာ ရောက်နေတယ်။ နိုင်ငံရေးပါတီတ ရပ်ဟာ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှု ရှိဖို့လိုတယ်။ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုမရှိဘဲနဲ့ ပါတီမရှိနိုင်ဘူး။ ပါတီပဲရှိပြီးတော့ နိုင်ငံရေး မရှိရင်လည်း အဲဒီပါတီဟာ လူရာလည်းဝင်မှာမဟုတ်ဘူး၊ ဘာမှလည်း လုပ်လို့ရမှာ မဟုတ်ဘူး၊ အရာလည်း ရောက်မှာမဟုတ်ဘူး”
“လူယုတ်မာတွေ ကောက်ကျစ်စဉ်းလဲစွာ ပြုလုပ်ပေးမယ့်
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို ပြည်သူတရပ်လုံး ဆန့်ကျင်ကြ”
အမှန်တရားချစ်သူ စာဖတ်ပရိတ်သတ်များအတွက်-- ဟစ်တိုင်အဖွဲ့ 
မြန်မာ အလုပ် သမားများ တင်ဆောင် လာသည့် ကား တိမ်း မှောက်
မြန်မာ အလုပ် သမားများ နှင့် ပန်းရံ လုပ်ငန်း ခွင်များတွင် အသုံးပြုသည့် သံနန်း ချောင်းများ တင်ဆောင် လာသည့် ကား တိမ်းမှောက်၍ မြန်မာ အလုပ် သမား အချို့ ဒဏ်ရာ ပြင်းထန် သဖြင့် ချင်းမိုင် ဆေးရုံတွင် အတွင်း လူနာ အဖြစ် ဆေးဝါး ကုသမှု ခံနေရကြောင်း သိရှိ ရသည်။ မတ်လ ၉ ရက်နေ့ နေ့လည် ပိုင်းက ချင်းမိုင်မြို့နယ် ခေါင်တန် နှင့် မဲအိုင် အဝေးပြေး လမ်းမကြီး နယ်မြေ အမှတ် ၃ ချင်းမိုင်မြို့နယ် စံကန်ဖေမြို့ ၀ခိုင်းရွာ အနီးတွင် ( အီစူဇူး ၈၂/၅၂၄၁ ) ကားအရှိန် မြှင့်တင် မောင်းနှင်သဖြင့် ကားလမ်းမပေါ်တွင် ဘေးတိုက် အနေအထား တိမ်းမှောက် သွားခဲ့သည်။ ကားတိမ်းမှောက် မှုကြောင့် မြန်မာ အလုပ်သမား ၁၅ ဦး ဒဏ်ရာ အနည်းငယ် ရရှိသွားခဲ့ပြီး ၅ ဦးမှာ ဒဏ်ရာ ပြင်းထန်း သဖြင့် ချင်းမိုင် ဆေးရုံတွင် အတွင်း လူနာ အဖြစ် တင်ထား ရသည်။
ချင်းမိုင်မြို့  နပ်ခေါဖိန် ဆေးရုံတွင် ၂ ဦး နှင့် မဟာလနပ်ခေါ ဆေးရုံတွင် ၃ ဦးတို့အား အတွင်း လူနာ အဖြစ် ဆေးဝါး ကုသမှု ခံယူ နေရသည်။ ဒဏ်ရာ အနည်းငယ် ရရှိကြသော မြန်မာ အလုပ်သမား ၁၅ ဦးကိုမူ စံကန်ဖေဆေးရုံတွင် ကူသမှု ခံယူ နေကြောင်း ထိုင်းနိုင်ငံထုတ် ထိုင်းရပ် သတင်းစာတွင် ဖေါ်ပြထားသည်။
အမှုစစ် ရဲအရာရှိ မူဆီကာရှိန် က ကားအရှိန် ပြင်လို့ မှောက်တာလား အခြား အကြောင်း တွေကြောင့် လားဆိုတာ သေသေ ချာချာ စစ်ဆေးပြီး အရေးယူ သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါ သတင်း စာတွင် ဖေါ်ပြ ထားသည်။ ထိခိုက် ဒဏ်ရာ ရသည့် လူများမှာ မြန်မာနိုင်ငံမှ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီး အမျိုးသား ခွဲခြားရေးသား ထားခြင်း မရှိပါ။ ၂၀၀၉ အကုန် ပိုင်းကလည်း ထိုင်းနိုင်ငံ တောင်ပိုင်း ဖူးခက်မြို့ တွင် ပန်းရံ လုပ်ငန်းခွင်သို့ သွားသည့် ကား တစ်စီး တိမ်းမှောက် ခဲ့သဖြင့် မြန်မာ အလုပ်သမား အချို့ ဒဏ်ရာ ရရှိ ခဲ့ဖူးသည်။
၁၁ . ၃ . ၂၀၁၀ l EM
ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကို အုပ်ချုပ်သူ၊ အုပ်ချုပ်ခံပြည်သူနှင့် အတိုက်အခံ (အုပ်စိုးသူကို နည်းမျိုးစုံဖြင့် တိုက်ပွဲဝင်နေသောအင်အားစု) စသော အားလုံးသောအင်အားစုများက လိုလား နေကြသည်။ ဤသို့ဆိုလျှင် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကို အဘယ်ကြောင့် မတည်ဆောက် နိုင်ပါသေးသနည်း။ သုံးသပ်ကြည့်မည်ဆိုပါက မည်သို့တည်ဆောက်ရမည်ကိုခဏထား၊ ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးအပေါ် ရှုမြင်ပုံ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုပုံခြင်းကပင် တူညီသောအမြင် မရှိသေးသည်ကို တွေ့ရ မည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ရှုမြင်ပုံ (၃) မျိုး ကွဲပြားနေသည်။
ပထမအမျိုးအစားတွင် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဆိုသည်မှာ သူပုန်သူကန်မရှိ အတိုက်အခံမရှိ အုပ်ချုပ်သူ၏ ချုပ်ကိုင်မှုအောက်တွင် ခေါင်းငုံ့၊ ခံမပြောသော အခြေအနေမျိုး နိုင်ငံနှင့်အဝှမ်း ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ရှိနေပါက ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးရပြီဟု မြင်ကြသည်။ အထူးသဖြင့် အာဏာရ အုပ်စိုးသူ လူတန်းစားများက ဤအမြင်မျိုး ရှိတတ်ကြသည်။
ဒုတိယအမျိုးအစားတွင် ပြည်သူများ ဝဝလင်လင်စားသုံးရပြီး အေးအေးချမ်းချမ်းနေနိုင်လျှင် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးရပြီဟု မြင်ကြသည်။ ဤအမြင်မျိုးကို အုပ်စိုးသူ လူတန်းစားထဲက တချို့နှင့် အုပ်စိုးခံပြည်သူထဲက လူပြိန်းများ လက်ခံထားကြသည်။
တတိယအမျိုးအစားတွင် ပြည်သူများ ဝဝလင်လင်စားသုံးနိုင်ရမည်။ အေးအေးချမ်းချမ်းလည်း အိပ်စက်နားနေနိုင်ရမည်။ လွတ်လပ်စွာပြောဆိုရေးသားခွင့် မိမိဆန္ဒကို ဖော်ပြခွင့် လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ယုံကြည်ခွင့်၊ လူမျိုးစုများ မိမိတို့အရေးကို မိမိတို့စီမံ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်များလည်း ရှိရမည်။ ထိုသို့သော အခွင့်အာဏာများကို တိုင်းပြည်နှင့်အဝှမ်း ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပြည်သူများခံစားခွင့်ရှိပါမှ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးရှိသည်ဟု ရှုမြင်သည်။ ဤအမြင်ကို အတိုက်အခံအင်အားစုများနှင့် နိုင်ငံရေးအမြင်ရှိသော ပြည်သူများက ရှုမြင်နေကြသည်။ စာဖတ်သူအနေနှင့် မည်သို့အမြင်ရှိပါ သနည်း။ မိမိတည်ရှိနေသော အတန်းအစား အလွှာအနေအထားထက် ဘက်ပေါင်းစုံစီစစ်ပြီးမှ အဖြေပေးစေလိုသည်။
စာရေးသူအနေနှင့် တတိယအမြင်ကိုသာ လက်ခံသည်။ ပထမအမြင်မှာ ဥာဏ်ပညာနည်းပါး သော အာဏာရလူတစ်စုက မိမိတို့အာဏာရထားစဉ်တွင်သာ ထားရှိနိုင်သော အမြင်မျိုးဖြစ်သည်။ အာဏာလက်လွတ်သွားသည်နှင့် ဤအမြင်ကို လက်ခံနိုင်တော့မည်မဟုတ်။ ဒုတိယအမြင်မှာလည်း စား၊ အိပ်၊ မ်ိတ်လိုက် သုံးမျိုးကိုသာ သိနားလည်သော တိရိစ္ဆာန်သာသာ လူပြိန်းများနှင့် အုပ်စိုး သူပြည်သူများကို အကျဉ်းသားအဆင့်တွင် ထားရှိလိုသော အုပ်စိုးသူ လူတချို့ထားရှိသောအမြင် သဘောထားဖြစ်သည်ဟု ရှုမြင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် လူသားများဖြစ်ကြသည်။ လူသားချင်းအတူတူ လိုလားတောင့်တမှုခြင်း သိပ်ကွာခြားကြလိမ့်မည်မဟုတ်။ ကျွဲနွဲများကိုမူ နဖာထိုး၊ ကြိုးဆွဲကြိမ်ဖြင့်တို့၍ လိုရာခိုင်းနိုင်သည်။ လူသားအချင်းချင်းကိုကား ထိုသို့လုပ်၍ ရမည်မဟုတ်။ ယေဘူယျအားဖြင့် အသိတရားနှင့် ခံစားချက်ချင်း တူညီကြသော လူသားများတွင် အာဏာရသူတို့က မိမိတို့ရောက်ရှိသော ဘဝ၏ အလိုဆန္ဒတစ်ခုတည်းကို မမြင်ဘဲ အခြားလူများ၏ အလိုဆန္ဒကိုလည်း ကြည့်မြင်တတ်ရန်လိုသည်။ ထိုသို့မဟုတ်ဘဲ သူတပါး၏ အလိုဆန္ဒသဘောထားများကို ဂရုမထား မိမိအစုအဖွဲ့၏ အမြင်သဘော ထားသက်သက်ဖြင့် ချုပ်ကိုင်ထားပါက ရုန်းကန်အန်တုမှုများဖြစ်ပေါ်လာပြီး နောက်ဆုံးတော်လှန် ပုန်ကန်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကို လွှဲမှားသောအမြင်ဖြင့် ရှုမြင် အဓိပ္ပါယ်ဖော်ပြီး ၎င်းကိုအဓ္ဓနည်းဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်လိုက်သောအခါ မလိုလားအပ် သော ဆန့်ကျင်ဘက်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ ဖြစ်လာရတော့သည်။
ဤမျှဆိုလျှင် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး ရယူတည်ဆောက်နိုင်ရန် အနိမ့်အဆုံးအဆင့်တွင် လိုအပ်သောသဘောထားအမြင် တရပ်ကိုတွေ့ရှိရပါပြီ။ ၎င်းကိုတနည်းအားဖြင့် အခြေခံလူ့အခွင့် အရေးဟုလည်း ခေါ်ဆိုသည်။ ဤအခြေခံလူ့အခွင့်အရေးများ မရှိဘဲ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကို မတည်ဆောက်နိုင်ပေ။
လူတို့၏အသိတရားကို ၎င်းတို့ဖြတ်သန်းခဲ့ရသောဘဝခရီးတစ်လျှောက်တွေ္မ ကြုံခဲ့ရသည် များနှင့် ၎င်းပတ်ဝန်းကျင် အဖြစ်အပျက်များက သတ်မှတ်ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံတွင် လူမျိုး လူတန်းစား လူ့အလွှာများစွာရှိသည့်အပြင် အသက်အရွယ် နေထိုင်ရာဒေသ ကွဲပြားမှုကြောင့်လည်း အသိအမြင်ခံယူချက်နှင့် သဘောထားအမျိုးမျိုး ရှိကြသည်။ ဤသို့သော အနေအထားတွင် အရေအတွက်ပိုများသော သို့မဟုတ် အာဏာရထားသောလူစုက မိမိတို့သဘောကျရာ တစ်ခုတည်း ကို ချမှတ်လုပ်ဆောင်ပါလျှင် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကို မည်သို့မျှဖော်ဆောင်နိုင်မည်မဟုတ်ပေ။
ထို့ကြောင့် နိုင်ငံအရေး ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးအရေးတို့တွင် အများပြည်သူ၏ ဆန္ဒကိုရယူပြီး ချမှတ်လုပ်ဆောင်ရေးဆိုသော ဒီမိုကရေစီလုပ်ငန်းစဉ်သည် လျှော်ကန်သင့်မြတ်ဆုံးဖြစ်သောကြောင့် နိုင်ငံတကားအတွေ့အကြုံ ရှည်ကြာသော ပြည်တွင်းစစ်အတွေ့အကြုံများက ပြသခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ကနေ့ဆိုလျှင် အုပ်စိုးသူများ၊ အုပ်စိုးခံပြည်သူများ အတိုက်အခံအင်အားစုများပါ ဒီမိုကရေစီဆိုသည့် အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ဖြင့်ကျင့်သုံးသွားရမည်ကို အားလုံးလက်ခံထားကြပြီးဖြစ်သည်။ ဒီမိုကရေစီ နည်းကျကျ အများပြည်သူတို့၏ ဆန္ဒကိုရယူသည်မှာ ရှောင်လွှဲ၍မရသော အချက်တရပ် ဖြစ်သည်။
ဒီမိုကရေစီဆိုသည်မှာ အများစုဖြစ်သော ပြည်သူတို့၏ သဘောဆန္ဒအရ အုပ်ချုပ်ခြင်းဆိုပြီး လူများစုဖြစ်သော အင်အားစုက မိမိတို့သဘောကျရာကိုချည်း ချမှတ်သွားပါက ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်း ရေး ရနုိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ မတူကွဲပြားသော လူ့အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည့် လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး ကိစ္စရပ်များတွင် တန်းတူမှု၊ လွတ်လပ်မှု တရားမျှတမှုများ ရှိရန် အထူးလိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ နိုင်ငံတွင် ဘာသာရေးအရ ပြဿနာအထူးမရှိ်သော်လည်း လူမျိုးရေးအရကား ကြီးမားသော ပြဿနာရှိခဲ့ ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဤကိစ္စရပ်တွင် ကိုယ်ကျိုးအတ္တအမြင်ကင်းသော တနည်းအားဖြင့် မဟာအမြင်ဖြင့် သူတပါးအပေါ် လွှမ်းမိုးလိုစိတ်ကင်းသော နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းနှင့် နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များက တန်းတူရေးနှင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ရှိသည့် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးကို သဘောတူနေကြပြီဖြစ်သည်။ လူမျိုးစုံချစ်ကြည်ရေးနှင့် တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးကို အမှန်တကယ်တည်ဆောက်လိုပါက မှန်ကန်သော သဘောထားအမြင်ကို လက်ခံဆုပ်ကိုင်ထားကြရမည်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်းခင်းပြသခဲ့သော ပင်လုံစိတ်ဓါတ်ကို တဖန်အသက်သွင်း ကြရန်လိုသည်။
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းဒီမိုကရေစီလုပ်ဟန်နှင့် တန်းတူရေးနှင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်း ခွင့်အပေါ်အခြေခံသော ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့ကို ကြည်လင်စွာ လက်ခံ နိုင်ပါက ရိုးသားပွင့်လင်းသော စေတနာဖြင့် ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းကြပါလျှင် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကို လွယ်ကူစွာတည်ဆောက်နိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ ဖြူစင်သောစေတနာကို အရင်းခံမထားဘဲ အမြီးကျက် အမြီးစား၊ ခေါင်းကျက် ခေါင်းစား၊ တစိပ်ရရ တပိုင်းရရ ရသမျှကို ဖဲ့ယူတတ်သော နည်းဖြင့်ကား ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကို မတည်ဆောက်နိုင်ပါ။
စစ်သည်နိုင်ငံရေး၏အဆက်ဖြစ်သည်။ လက်နက်ကိုင် ပုန်ကန်မှုကို နိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးများ ဆုံးရှုံးမှုက မွေးထုတ်ပေးခဲ့သည်။ နိုင်ငံရေးပြဿနာကို စစ်ရေးဖြင့် ဖြေရှင်းနေပါက ယာယီခေတ္တ သို့မဟုတ် အပေါ်ယံမျှကိုသာ ဖြေရှင်းနိုင်မည်။ ပြီးပြည့်စုံသော ပြေလည်မှုကို နိုင်ငံရေးနည်းဖြင့် ရဲဝံ့စွာဖြေရှင်းရန်မှတပါး စစ်မှန်သောပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးကို မရနိုင်ပါ။ နိုင်ငံရေးအရ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမည်ဆိုပါက သူ့အမြင်ကိုယ့်အမြင် ဘက်ပေါင်းစုံအမြင်များကို သိရမည်။ ထိုအခါ အမှားအမှန်နှင့် အတိမ်အနက်ကို ခွဲခြားနိုင်မည်။ ၎င်းအပေါ်အပေးအယူ အလျော့အတင်းများလုပ်ပြီး ကျေလည်စွာ ညှိနှိုင်းပါက ပြေလည်မှုရရှိလိမ့်မည်။ ဤသည်ကားမှန်ကန်သော နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဤသို့အချင်းချင်းညှိနှိုင်း ဖြေရှင်းသော နည်းလမ်းမှလွှဲ၍ သိကြားမင်းလူ့ပြည်ဆင်းပြီး ဖြေရှင်း ပေးလည်း ပြေလည်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ စေတနာမှန်သော ခေါင်းဆောင်များသည် မှန်ကန်သော နည်းလမ်းများကို ရဲဝံ့စွာ ရွေးချယ်လျှောက်လှမ်းကြရမည်။
မှန်ကန်သောနည်းလမ်းကို မြင်နေပါလျှက် မလျှောက်ဘဲ စစရေးဖြင့် ဆက်တိုက်နေမည်ဆိုပါက နောက်ထပ်အနှစ်ငါးဆယ်ပြည့်လည်း ပြီးဆုံးနိုင်မည် မဟုတ်ပေ။ လူမျိုးစုရေရာတွင် အာဏာခွဲဝေမှုမရှိဘဲ ဒီမိုကရေစီရရှိရုံမျှနှင့် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကို မရနိုင်ကြောင်း အင်္ဂလန်နှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့က သက်သေပြနေပါသည်။ လူမျိုးစုများ၏ ပြဿနာများကို ယာယီအပစ်အခတ် ရပ်စဲထားပြီး ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး၊ စီပွားရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်များဖြင့် ဖြေရှင်းနေ၍ကား မပြေလည်နိုင်။ စစ်ပွဲတစ်ရာတိုက်ရန်မလို နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ဖြိုကွဲသောနည်းသည် မှန်ကန်သောနည်းမဟုတ်၊ အချိန်ဆွဲသော နည်းတခုသာ ဖြစ်သည်။ ခေါင်းဆောင်အင်အားစုကို သာယာမှုဖြင့် သိမ်းသွင်ယူသော နည်းသည်လည်း သာယာမှုအပေါ် မူးယစ်တတ်သော ခေါင်းဆောင်အချို့ကိုသာ ဆွဲဆောင်နှစ်သိမ့်၍ ရကောင်းရမည်။ ခေါင်းဆောင်အချို့လျော့သွားရုံမျှဖြင့် တော်လှန်ရေးကို ရပ်တန့်အောင် လုပ်၍ရမည်မဟုတ်ပေ။ တော်လှန်ရေးဆုိုသော လက်နက်ကိုင် ပုန်ကန်မှုသည် နိုင်ငံရေးအခွင့် အာဏာရရှိရေးဟူသော ဦးတည်ချက်အတွက်ဖြစ်သည်။ ထိုနိုင်ငံရေးအခွင့်အာဏာပြဿနာကို နိုင်ငံရေးအရ ဆွေးနွေးဖြေရှင်းမှု မပြုသမျှ မပြေလည် မပြီးပြတ်နိုင်။ ထိုသို့မပြီးပြတ်ပါကငြိမ်းချမ်းရေးကို ဦးတည်သော ရည်ရွယ်ချက်သည် အချည်းအနှီးပင် ဖြစ်နေပါလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံတွင် သယံဇာတပေါကြွယ်ဝနေပါလျှက် နိုင်ငံ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအဆင့်သည် ကမ္ဘာတွင် နောက်ဆုံးတန်းကလိုက်နေရသည်။ အချိန်ကိုအကျိုးမဲ့စွာ အနှစ်ငါးဆယ်ကျော် ဖြုန်းခဲ့ပြီးပြီးဖြစ်သည်။ နောက်ထပ်အချိန်ုမပေးသင့်တော့ပါ။ လမ်းမှန်ကို သိမြင်နေပါလျှက် မလျှောက်သော ရှေ့ဆောင်သူသည် ကြာရှည်စွာ ရှေ့ဆောင်နိုင်မည် မဟုတ်။ နိုင်ငံရေးကို မလှည့်စားနှင့် ပြည်သူကို မလှည့်စားနှင့် သမိုင်းအိမ်သာကျင်းထဲ နစ်မွန်သွားရပေလိမ့်မည်။ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးမရှိဘဲ တိုးတက်သော တိုင်းပြည်တခု မတည်ဆောက်နိုင်။ ထို့ကြောင့် စေတနာမှန်လျှင် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကို အမြန်ဖော်ဆောင်ပြဖို့ လိုသည်။
၁၁/ မတ် ၂၀၁၀
နအဖစစ်အစိုးရက ရွေးကောက်ပွဲအသံတွေ ပေးတာကြားရတိုင်း၊ အဲဒီရွေးကောက်ပွဲကို ထုံးသုတ်-ရွှေချ ပြောကြတာတွေ ကြား ရတိုင်း ဒီရွေးကောက်ပွဲကနေ ပေါ်လာမယ့် လွှတ်တော်ရဲ့ပုံကို စဉ်းစားနေမိပါတယ်။ စဉ်းစားနည်းဟာ ကလေးဆန်တယ်ပဲ ပြောပြော၊ လူပြိန်းဆန်တယ်ပဲပြောပြော အလွယ်ဆုံးကိစ္စတခုကိုပဲ အရင်ဆုံးတွေးမိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ တကယ်လို့ သူတို့ရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ “သမ္မတရွေးချယ်တင်မြှောက်ရေးအဖွဲ့” ဆိုတာက ဗိုလ်သန်းရွှေကို သမ္မတအဖြစ် တင်မြှောက်ပြီးလို့ လွှတ်တော်ထဲမှာ ကြေညာလာပြီဆိုရင် ဘယ်သူကများ ဆန့်ကျင်ရဲမလဲ၊ စင်ပြိုင်အမည်တခု တင်ရဲမလားဆိုတာပါ။ အဲဒီလိုအခါမှာ လွှတ်တော်ခန်းမကြီး တခုလုံးဟာ ငြိမ်ကျသွားမလား၊ ဆူပွက်သွားမလား၊ တိုးတိုးပြောသံတွေ မသဲမကွဲ ကြားလာရမလား၊ သူ့ထက်ငါဦး အလုအယက် ထောက်ခံကြမလား၊ တယောက်မျက်နှာတယောက် ကြည့်နေကြမလား၊ ဘာပဲပြောပြော “စစ်မှန်ပြီး စည်းကမ်းရှိတဲ့ ဒီမိုကရေစီ” ကြီးကို ကျင့်သုံးနေချိန်ဆိုတော့ စည်းကမ်းတကျတော့ ဖြစ်မှာ သေချာပါတယ်။ မဆလလက်ထက်တုန်းက ဗိုလ်နေဝင်းစကားပြောနေရင် အပေါ့အပါးတောင် ထမသွားကြရဘူးဆိုသမို့လား။ ဒီလွှတ်တော်ထဲက စားပွဲတွေအောက်မှာ အသံဖမ်းစက်တွေ တပ်မထားပေမယ့် ကလို့စ် ဆားကစ်တီဗွီ (close circuit TV) လို တီဗွီကင်မရာတွေနဲ့တော့ လူအားလုံးကို စောင့်ကြည့်နေမှာ သေချာပါတယ်။
တဆက်တည်း ဆက်တွေးမိတာက အဲဒီကြပ်ပြေးက လွှတ်တော်ကြီးမှာ (၂၅) ရာခိုင်နှုန်းသော စစ်တပ်ကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီး များက လွှတ်တော်ခန်းမအတွင်း ဘယ်လိုနေရာမှာ ထိုင်ကြမှာလဲဆိုတာပါ။ တခြားကိုယ်စားလှယ်တွေကြားမှာပဲ ရောထိုင်မှာလား။ ဒါဆိုရင် ကျန်တဲ့လူတွေစိတ်ထဲမှာ ထောက်လှမ်းရေး လာထိုင်နေတယ်လို့ ခံစားရမလား။ အနေကျုံ့ကြမှာလား။ ဒါမှမဟုတ် အင်ဒိုနီးရှား လွှတ်တော်မှာလို သူတို့ချည်းသတ်သတ် သီးသန့်ထိုင်မှာလား။ တရားရုံးက ဂျူရီအဖွဲ့လို ထိုင်နေမှာလား။ ဒီဘယ်သူ့ မဲတမဲမှမရခဲ့တဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာ လွှတ်တော်ကို ယူနီဖောင်းဝတ်နဲ့ တက်လာကြမှာလား၊ အရပ်ဝတ်နဲ့ တက်လာကြမှာလား။ ကြပ်ပြေးက လွှတ်တော်ဆိုတာကြီးထဲမှာ တနေရာကကွက်ပြီး စိမ်းနေရင် ရုပ်မြင်သံကြားထဲမှာတော့ ထင်းနေမှာပဲ။ ဗိုလ်သန်းရွှေနည်း ဗိုလ်သန်းရွှေဟန် ဒီမိုကရေစီရဲ့ အထိမ်းအမှတ် လက္ခဏာပေါ့လေ၊ ဒါလောက်တော့ ရှိမပေါ့။
တကယ်လို့များ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေထဲက တယောက်ယောက်ကနေ အစိုးရဆန့်ကျင်တဲ့ အယူအဆတခုကို တင်ပြနေပါပြီတဲ့၊ ဒါကို အဲဒီအစိမ်းအုပ်ထဲက တယောက်က ချောင်းဟန့်သံကျယ်ကျယ်ပေးလိုက်ရင် ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲ။ ဆက်ပြောဝံ့ပါ့မလား။ အဲဒီစစ်ဗိုလ်အုပ်စုထဲက တင်တဲ့အဆိုတခုကို ကျန်တဲ့လူတွေက ဆန့်ကျင်ခွင့်ရှိပါ့မလား။ “ခေါင်းညိတ်လိုက်ရုံမှအပ ကျနော်ကကော ဘာများတတ်နိုင်ဦးမည်နည်း” ဆိုတဲ့အဖြစ်တွေကို စောင့်ကြည့်ကြရပါလိမ့်မယ်။
အဲဒီလိုပတ်ဝန်းကျင်၊ အဲဒီလိုလေထုထဲမှာ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့တက်လာတဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တယောက်မကျန် (၇၅) ရာခိုင်နှုန်းကို စုစည်းပြီး ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဖို့ အဆိုတွေတင်ကြမှာတဲ့။ နားရှိလို့သာ ကြားမိရတာပါပဲ။
ဒီတော့ အမျိုးသားနိုင်ငံရေးတွင် တပ်မတော်၏ဦးဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍဆိုတာ ဘယ်လိုဟာလဲဆိုတာကို ကမ္ဘာရော၊ မြန်မာကပါ မကြာခင် မျက်ဝါးထင်ထင် တွေ့ကြရပါတော့မယ်။ ကျောချတော့ စစ်ဗိုလ်မှန်း သိကြကရောပေါ့။ တကယ်တော့ သူတို့ဟာ ၁၉၉၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လထဲ လောက်ကစပြီး တပ်မတော်အရာရှိတဦးဆိုတဲ့ ကလောင်နာမည်သုံးပြီး ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဆောင်းပါးတွေ အဆက်မပြတ်ရေးတာတွေ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ တနည်း သူတို့လုပ်ချင်တဲ့ဥပဒေကို လူထုက ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲလို့ သွေးတိုးစမ်းခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက် သူတို့ရဲ့ “အမျိုးသားညီလာခံ” ဆိုတာမှာ စစ်တပ်ကိုယ်စားလှယ်တွေကို ထည့်သွင်းခဲ့တယ်။ ဒါဟာလည်း သူတို့ဖြစ်စေချင်တဲ့ လွှတ်တော်မျိုးအတွက် မြေစမ်းခရမ်းပျိုးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို “စပေ့စ်”တွေ ပြည့်လျှမ်းနေတဲ့ လွှတ်တော်ကြီးထဲမှာ စစ်ဗိုလ်တွေက တိုင်သံပေးလိုက်၊ “တတိယအင်အားစု” အမည်ခံတွေက (ကံကောင်းထောက်မလို့ ပါရှိခဲ့သော်) ဖောက်သံပေးလိုက်နဲ့ အတိုက်အခံတွေအပေါ် စီရင်ချက်တွေချကြတဲ့ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ကြီးနဲ့ လွှတ်တော်ကြီး ဖြစ်ပေါ်လာတော့မှာပါ။
ဒီလိုနဲ့ပဲ သူတို့ရဲ့ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊ စာမျက်နှာ (၃) အခန်း (၁) နိုင်ငံတော်အခြေခံမူများ အပိုဒ် (၆) (စ) မှာ ပါတဲ့ “အမျိုးသားနိုင်ငံရေး ဦးဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍတွင် တပ်မတော်က ပါဝင်ထမ်းဆောင်” တာတွေကို ပြည်သူတွေ နဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ ရင်ဆိုင်ရပါတော့မယ်။ မှန်ပါတယ်၊ ၁၉၇၄ ခုနှစ်တုန်းက ဖွဲ့စည်းပုံမှာတော့ ဒါမျိုးတွေမပါပါဘူး။ မပါတဲ့အကြောင်းက အဲဒီတုန်းက မဆလ တပါတီတည်း အုပ်ချုပ်နေချိန်၊ လွှတ်တော်ထဲမှာ မဆလနဲ့မဆလတွေသာရှိနေပြီး မဆလစစ်အုပ်စု၊ စစ်အုပ်စုမဆလ ဖြစ်နေတဲ့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။
ဗမာပြည်မှာ သမိုင်းမှာရှိခဲ့ဖူးတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများကို ပြန်ကြည့်လိုက်ပါ။ ပထမဆုံးက ကိုလိုနီခေတ် ၁၉၃၅ ခုနှစ်မှာ ဗြိတိသျှအစိုးရက ဗမာပြည်ကို အိန္ဒိယလက်အောက်ကနေ ခွဲထုတ်ပြီးနောက် ပြဋ္ဌာန်းသတ်မှတ်ပေးခဲ့တဲ့ ‘၁၉၃၅ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံ စီရင်အုပ်ချုပ်မှုဥပဒေ’ (1935 Government of Burma Act) ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ ၉၁ ဌာန အုပ်ချုပ်ရေးလို့လည်း လူသိများခဲ့တဲ့ ဒီဥပဒေကို ဗမာနိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံးသော ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေလို့ ပြောရင်လည်း ရပါတယ်။ ဒီဥပဒေအရ လွှတ်တော် (၂) ရပ် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံခြားဆက်သွယ်ရေး၊ ကာကွယ်ရေး၊ ဘာသာရေး၊ တောင်တန်းဒေသ အုပ်ချုပ်ရေး၊ ငွေရေးကြေးရေးပေါ်လစီ၊ ငွေစက္ကူနဲ့ ငွေဒင်္ဂါးကိစ္စ စတဲ့ အရေးပါသောကိစ္စများနဲ့ပတ်သက်လာရင် ဘုရင်ခံမှာသာ စိတ်တိုင်းကျစီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာ (Discretionary Power) ရှိတယ်ဆိုတဲ့ သတ်မှတ်ချက်လည်း ပါနေပါတယ်။ စစ်တပ်ကတော့ အင်္ဂလန်က ဘုရင်၊ ဘုရင်မလက်ထဲမှာပဲ ရှိပါတယ်။
နောက်တခုက ဂျပန်ခေတ်တုန်းကရခဲ့တဲ့ “လွတ်လပ်ရေးကာလ” တုန်းက ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီကာလတုန်းက အစိုးရရုံးတွေမှာ တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်မရှိဘဲ ဂျပန်စစ်တပ်မှာသာ တရားစီရင်ခွင့်ရှိနေပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက“ဗမာပြည်အစိုးရ” ဟာ ဘီအိုင်အေတပ်ကိုသာ ချုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိပြီး ဗမာပြည်ထဲမှာရှိနေပြီး အဆမတန် အင်အားပိုမိုကြီးမားတဲ့ ဂျပန်တပ်ကြီးကိုတော့ တိုကျိုမှာနေတဲ့ ဂျပန်ဧကရာဇ်ဘုရင်ကသာ ချုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။
အခုလည်း နအဖစစ်အစိုးရရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေဟာ လွှတ်တော်ရဲ့အခွင့်အာဏာတွေကို အမျိုးမျိုးကန့်သတ်ထားရုံမက စစ်တပ်ကို သူတို့စစ်အုပ်စုကလွဲပြီး ဘယ်သူမှချုပ်ကိုင်ခွင့်မရအောင် ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေအခန်း (၇) မှာ တပ်မတော်ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ချုပ်ကိုင်ခွင့်တွေသာ ပါရှိပါတယ်။ ဒီတပ်မတော်က အစိုးရအဖွဲ့ကို နာခံရမယ်၊ နိုင်ငံတော်အပေါ် သစ္စာရှိရမယ်ဆိုတဲ့ စကားမျိုး တလုံးမှမပါပါဘူး။ စစ်တပ်ဟာ တတိုင်းတပြည်လုံးရဲ့အထက်၊ သူတို့ဖန်တီးထားတဲ့ “လွှတ်တော်” ရဲ့ အထက်မှာပဲ ရှိနေပါတယ်။ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကို သမ္မတက တိုက်ရိုက်ခန့်တာ၊ ဒီဝန်ကြီးကပဲ စစ်ကောင်စီ (လုံခြုံရေးကောင်စီ) ကို တိုက်ရိုက်တာဝန်ခံရတာ၊ တပ်ဖွဲ့စည်းတာ၊ ခန့်အပ်တာ၊ ရာထူးတိုးတာ စတာတွေအားလုံးကို ကက်ဘိနက်ကတောင် ပြောဆိုခွင့်မရှိတာ စတဲ့အချက်တွေကိုကြည့်လိုက်ရင် အမြဲတမ်း ချက်ကြီးကချည့် အထက်က ဖြစ်နေမယ်ဆိုတာ ရှင်းနေပါတယ်။ ဒါကို အထက်မှာပြောသလို (၇၅) ရာခိုင်နှုန်းအင်အားစုစည်းပြီး ပြောင်းလဲမယ်လို့ ပြောသံကြားရတော့ ‘ပြောလည်း ပြောထွက်ပါပေ့’ လို့သာ မှတ်ချက်ချရပါတော့တယ်။
တကယ်က ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကြီးက စလို့ စစ်အုပ်စုထိပ်သီးတွေအနေနဲ့ ဒီစစ်တပ်ကို ဒီအတိုင်း ဆက်ထိန်းသွားလို့ မရမှန်း သဘောပေါက်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ တပ်တွေကို စီးပွားရှာခွင့် (တရားမဝင်) အခွန်ကောက်ခွင့်တွေပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တပ်ကို ဒါလောက်ဖျက်ဆီးရုံနဲ့ မလုံလောက်မှန်းသိလို့ အာဏာပါခွဲပေးပြီး ထိန်းဖို့ ဒီဖွဲ့စည်းပုံကို ရေးဆွဲခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြောရရင် တိုင်းပြည်ရဲ့ ဓနဥစ္စာ အဆီအနှစ်၊ ကျောရိုးလုပ်ငန်းအားလုံး စစ်အုပ်စုလက်ထဲ လုံးလုံးလျားလျားရောက်နေပါပြီ။ လိုအပ်နေတာက အဲဒါကို တရားဝင်ဥပဒေအာဏာနဲ့ အကာအကွယ်ပေးဖို့သာဖြစ်ပြီး ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေ၊ ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲ စတာတွေဟာ အဲဒီအတွက် စီမံချက်တွေသာ ဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံရေးမှာ သမိုင်းတရားခံဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ သတ်မှတ်ချက်မျိုးရှိပါတယ်။ ဘယ်သူမှ ဒီဘွဲ့ကို မလိုချင်ပါဘူး။ ဒါဟာ တမင်ရည်ရွယ်ပြီး လုပ်သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မရည်ရွယ်ဘဲ လုပ်မိသူပဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်ရပ်ကိုအကြောင်းပြုပီး သတ်မှတ်ကြတာပါ။ အထူးသဖြင့် နှောင်းလူတွေက သတ်မှတ်ကြတာပါ။ နှောင်းလူတွေမှာက ဒီနေ့ရှိနေတဲ့ အကန့်အသတ်တွေက လွတ်ကင်းပါတယ်။ နိုင်ငံရေးကို တကယ်တမ်း လေးလေးနက်နက် လုပ်သူ၊ ကိုယ့်ဘဝကို နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းထဲမှာ နှစ်ထားသူတွေဟာ ဒီလိုတရားခံဖြစ်မှာကို သိပ်သတိထားရှောင်ရှားရပါတယ်။ လာမယ့် ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲဟာ စစ်အာဏာရှင် အုပ်စိုးမှုကို ရေရှည်အသိအမှတ်ပြုပေးလိမ့်မယ်ဆိုတာ ရှင်းနေလျက်နဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမှတပါး အခြားမရှိလို့ ပြောနေသူများဟာ ဗိုလ်သန်းရွှေတို့နဲ့ တတန်းတည်း တရားခံစာရင်းဝင်သွားနိုင်ပါတယ်။ အနည်းဆုံး ကြံရာပါပေါ့။
http://ifile.it/sjemnhv/2010%2003%2008%20-%20Amyotha%20Hluttaw%20Election%20Law.pdf2010 03 08 - Amyotha Hluttaw Election Law
http://ifile.it/aykbjz72010 03 08 - Pyithu Hluttaw Election Law